Google Drive wuxuu soo bandhigayaa naqshaddiisa cusub ee ay dhiirrigelisay Qalabka Naqshadeynta | War gadget
Naqshadeynta Maaddadu waxay noqotay mid ka mid ah tiirarka wax soo saarka Google. Waad ku mahadsan tahay tilmaamahan, shirkaddu waxay wax ka beddeleysaa naqshada qalabkeeda badan. Waxaan dhowaan aragnay sida Gmail ay ugu soo shaac baxday naqshad cusub. Hadda, waa markiisa Google Drive, kaas oo horey u soo saaray naqshad cusub. Mar labaad ayaa lagu dhiirrigeliyey Qalabka Naqshadeynta.
Intaa waxaa dheer, naqshada cusub ee aan ku arki karno Google Drive waxay iska shabahaan qaabeynta lagu soo bandhigay Gmail dhawaan. Marka waxaad sidoo kale arki kartaa isku day ay shirkaddu ku doonayso inay ku abuurto is waafajin u dhexeeya adeegyadeeda.
In kasta oo aan sidoo kale waxoogaa faraq u dhaxeeyo nashqadaha labada madal. Sababtoo ah kiiskan sifooyin cusub lama soo bandhigin. Xagga Gmail, qaabab cusub ayaa la soo saaray. Wax aan hadda dhicin. Uguyaraan wali ma dhicin.
Beddelaadda naqshadeynta Google Drive ayaa lagu dhawaaqay inta lagu guda jiro dabaaldegga Google I / O 2018. Dhacdadii ay shirkadda Mareykanku nooga tagtay tiro badan oo ugub ah oo ku saabsan alaabteeda iyo adeegyadeeda. Wax sidoo kale ku dhaca madal kaydinta daruurteeda.
Isticmaalayaal badan ayaa laga yaabaa inay horayba u arkaan naqshadda cusub ee Google Drive markay soo galaan. Laakiin xaalado badan wali lama muujin. Waa wax ay tahay in ay dhaqso u dhacaan, inkasta oo aan taariikh si rasmi ah loo xusin isbedelkan.
Waxa cad waa inaan aragno sida Google waxay la jaanqaadeysaa naqshadaheeda si ay ugu hogaansanaato tilmaamaha Naqshadeynta Maaddada. Marka waxaan aragnaa waxyaabo ay iskaga mid yihiin naqshadaha ay shirkaddu soo bandhigeyso. Wax doonaya inuu ka dhigo mid aad ugu raaxeysanaya dadka isticmaala inay adeegsadaan adeegyada kala duwan ee shirkadda Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Google Drive wuxuu soo bandhigayaa naqshad cusub